TCM Physical fitsaboana - Shijiazhuang Yiling Hospital
1. Meridian firaka fitaovana fitsaboana
Mpitari-dalana ny mitataovovonan haavon'ny fitsaboana mampiasa fitaovana elektronika ny fitambaran'ny teknolojia sy ny microcomputer teknolojia miaraka amin'ny fanafody nentim-paharazana sinoa teorian'ny ny tanindrazana mba hahatonga ny tsindrona volamena, fanorana sy ny otra fanafody fitsaboana ny Shinoa mba ho tanteraka ao amin'ny nomerika fampisehoana fitaovana fitsaboana. Ny endri-javatra malaza no napetraky ny microcomputer masontsivana fanaraha-maso, ary araka ny isan-karazany ilain'ny fitsaboana, fanarenana, fikarakarana ara-pahasalamana, misafidy fomba hafa noho ny fitsaboana Functional, mba ho lasibatra, mety sy mahomby.
Taolana sy ny mpiray degenerative aretina, atidohany infarction, atidohany hemorrhage rehefa hemiplegia fitsaboana ara-batana.
2. Meridian mikoriana tsindrona fitsaboana fitaovana
Meridian Stream Mariho, izay antsoina koa hoe "fotoana tsara indrindra ny tsindrona volamena fomba", no tena mifono mistery sy mahagaga Shinoa fanafody fahiny Shina, miaraka amin'ny miavaka vokatra mahasalama sy fahagagana mahatalanjona. Dia ny fampiasana ny microcomputer SCM teknolojia, ny fanatanterahana ny Meridian Stream ary ny domohina valo fomba marina tsara ny fikajiana, ny fampiasana ny electrode tampina fa tsy fanjaitra, ny tena simulation ny tsindrona volamena teknika, pana ny olombelona tontolo iainana, mahay mandanjalanja Yin sy Yang, mahazo ny alalan 'ny meridians fanafody.
Lohalika vanin-taolana, fiakaran'ny tosidrà, fahatapahan'ny lalan-dra, mahita tory, indray fanaintainana, sciatica, aretin'andoha, dysmenorrhea, hamafi-hatokao, vozon-tranonjaza spondylosis, mangatsiaka tsorony, ombelahin-tongony fanaintainana sy ny toy izany.
3. Microwave fitaovana fitsaboana
Microwave fitsaboana fitaovana ampiasaina ao amin'ny microwave hyperthermia dia tsy fomba fifandraisana fanafanana, dia tsy misy mety mafana sy ny herinaratra may may vokatry ny herinaratra fifandraisana. Noho ny fanatsarana ny teknolojia isan-karazany, tsy misy fitsaboana microwave fanatoranana, mety ho vita ao amin'ny toeram-pitsaboana, amin'ny Tsotra, Azo Antoka endri-javatra.
1) Urology: kanseran'ny tatavia, prostatic hypertrophy, prostatitis
2) Department of lavaka: cheilitis, glossitis, bibikely, periodontal aretina, fery, periapical periodontitis, homamiadana.
3) Gastroenterology: tsinay mandeha ra, nandoro polyp, fery solidification, tery esophageal dilatation.
4) Fanarenana physiotherapy: lumbar hozatra sacrés, vozon-tranonjaza spondylosis, sprains, mangatsiaka tsorony, vanin-taolana, ratra fanasitranana haingana.
5) ny aretim-behivavy: vozon-tranonjaza fahasimban'ny, bibikely, trompes utérine dia mampitohy fibroids, mastitis, vaginitis, lohavaniana milaza zavatra aretina, Pasteur kista, fivavia- nahitana aretin-koditra.
6) Dermatology: fivavia- nahitana aretin-koditra, underarm fofona, hemangiomas, shingles, eczema.
7) Anorectal: anatiny vay, vay ivelany, mifangaro vay, rectal bibikely, eczema lava-pitombenana.
8) ENT: epistaxis, mitaiza rhinitis, ambany turbinate hypertrophy, nasal bibikely, pharyngeal lymphoid follicles, nasopharyngitis, tonsillitis.
4.M ulti-asa moxibustion fitaovana
Multifunctional moxibustion fitaovana dia mifototra amin'ny fitsipiky ny nentim-paharazana moxibustion, miaraka amin'ny teknolojia maoderina solosaina elektronika sy ny andriamby fitsaboana namorona sy natao ho moxibustion mafana, mafana tsindrona volamena, moxibustion, sombin-javatra moxibustion, moxibustion moxibustion fiasan'ny fitaovana maoderina moxibustion.
1) gripa, asma sy ny sisa
2) Rheumatism sy rohana mamely vanin-taolana, tsy maintsy spondylitis, vozon-tranonjaza spondylosis, mangatsiaka sorony sy ny sisa.
3) Gynecological aretina.
4) Vavony fanaintainana ny aretim-pivalanana sy ny fandevonan-kanina aretina.
6) hatsiaka rehetra aretina
5. Red fitaovana fitsaboana
Red fitaovana fitsaboana fahazavana vaovao dia karazana fitaovana fitsaboana fahazavana izay azo ampiharina amin'ny hopitaly sy ny fianakaviana mba hanome fitsaboana tsara kokoa ho an'ny faritra lehibe sasany aretina. Light Output Mizara ho matanjaka sy antontan-taratasy manan-kery ny mampifanaraka ny bika marary hafa. Ny milina rehetra mandany ny mitsingevana rihana kabinetra famolavolana, ny jiro mena koa ny lohany electrically Powered hifindra hatrany, izany hoe, ny boky mena fahazavana sy fiara jiro mena eny an-tsena, izay manamora indrindra ny fitsaboana mpiasa.
1) ny aretim-behivavy: cervicitis, vaginitis, lohavaniana milaza zavatra aretina, fanampiny mamaivay, leukoplakia, fivavia- mangidihidy, lateral tsimokaretina sy ny fanasitranana.
2) Men: prostatitis, manimba fanasitranana sy ny fitsaboana hamerenana amin'ny laoniny.
3) Dermatology: shingles, fery, dermatitis, maimaika, bedsores sy ny sisa.
4) ENT: Matsilo sy mitaiza rhinitis, pharyngitis sy ny sisa.
5) Fandidiana: may, ratram-po, aretina sy Teknika fanasitranana.
6. RAHA hanin-kotrana fitaovana fitsaboana
Analgesic, mampirisika ny ra hivezivezy, haneho taolana hozatra, nanalefaka holatra.
Amin'ny maha-karazana physiotherapy, RAHA electrotherapy manana tantara ny 100 taona mahery. RAHA electrotherapy Mitana anjara toerana lehibe teo amin'ny fitsaboana, ny fisorohana, fanarenana sy ny fikarakarana ara-pahasalamana, ary lasa tena ilaina anisan'ny fitsaboana ankapobeny.
1) Soft sela, osteoarthrosis, vozon-tranonjaza spondylosis, mangatsiaka tsorony, rohana mamely vanin-taolana, malefaka sela contusion, myositis, tenosynovitis, hampiasaina intsony ny atrophy sy ny sisa.
2) fandidiana hafa aretina, scarring, Nofo miraikitra, taorian'ny sclérose tsindrona, postoperative tsinay nalemy sy ny sisa.
3) rafi-pitatitra aretina, peripheral neuropathy, endrika neuritis, sciatica sy ny sisa.
4) fandevonan-kanina aretina, tsinay fihenjanana, tsy mora fitohanana sy ny sisa.
5) urinary taratasy mivalona hafa vato, urinary ny fihazonana, aretina mitaiza milaza zavatra lohavaniana.